Riek Machar: Riek Machar: Badi Dhulka Koonfurta Sudan Gacanteena Ayuu Ku Jiraa * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Bor, Mareeg.com: Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Koonfurta Sudan, Riek Machar ayaa sheegay in ciidamada taageersan ay la wareegeen inta badan dhulka Sudan.
Riek Machar, ayaa u sheegay BBC in askartiisa ay la wareegeen gobolka shidaalka soo saara ee Unity ayna hadda gacanta ku hayaan waddanka intiisa badan. Majirto cid si madax banaan u xaqiijineysa arrintaas.
Wuxuu sheegay taliyihii ciidamada Jeneral James Koang, inuu gobolka Unity kaga baxsaday dowladda.
Goor hore ayaa afhayeen u hadlay ciidanka South Sudan oo lagu magacaabo, Philip Aguirre wuxuu sheegay in taliyihii ciidamada dowladda ee gobolka Unity ee hodonka ku ah saliidda uu fakaday, kuna biiray ciidamada taageersan Riek Machar.
Riek Machar ayaa dhanka kale sheegay inuu aqbalayo wada hadal uu la galo madaxweyne Salva Kiir hadii la sii daayo siyaasiyiinta xirxiran.
Dhanka kale, labo diyaaradood oo Mareykanku leeyahay oo ku socday dalka Uganda ayaa la weeraray xilli ay dul marayeen gobolka Jonglei, waxaana ku dhaawacmay 3 askari.
Horay waxaa magaalada Bor lagu dilay 3 ka mid ah ciidamada Qaramada Midoobay ee nabad ilaalinta, kuwaasoo u dhashay dalka Hindiya.
15-kii bishaan ayaa dalka Koonfurta Sudan waxaa ka qarxay dagaal u dhaxeeyey ciidamo kala taageeraya madaxweyne Salva Kiir iyo ku xigeenkiisii hore Riek Machar, waxaana dalaakaas ilaa hadda ku geeriyooday ilaa 500 ruux.